Global Voices teny Malagasy · 22 Janoary 2008
Tantara tamin'ny 22 Janoary 2008
Bôtsoana : Fanatanterahana sarimihetsika any Bôtsoana
Botsoana 22 Janoary 2008
Mma Ramotswa no manapariaka lahatsoratra vaovao mikasika ny fanatanterahana sarimihetsika sy lahatsary any Bôtsoana : Over the past 10 or 20 years, digital cameras and computer editing have dramatically opened up filmmaking possibilities in “remote” places. Things are looking up for drama films and documentaries made in Botswana. “Tao anatin'izay...
Shina: Fitombon'ny mpivoivoy amin'ny aterineto
Shina 22 Janoary 2008
Navoakan'ny Foiben'ny Fifandraisan-davitra sy filazam-baovao any Shina tamin'ny herinandro lasa teo ny mombamomba ny fivoaran'ny Aterineto any. Voambara ary fa nahatratra 210 000 000 ny isan'ny Olonineto (mpivoivoy amin'ny aterineto) tamin'ny taona 2007 ka nolazana fa ny nampitombo be dia be io isa io dia noho ny fitombon'ny tambanivohitra niditra...
Velabelarin’i Hsiang-Tai ny fiainan’ny gadra roa Hu Jia sy Zheng Jinyan izay eo ambany fitantanan’ny polisy miandraikitra ny filaminam-pirenena (tsy mitovy amin’ny teny hoe mitandro ny filaminana tsotra izany). Asongadin’ny mpamaham-bolongana Taiwaney ary fa: Raha tian’i Shina tokoa ny hiverenan’i Taiwan ho ao aminy, aza fady, tompoko, miovà aloha ianareo!...
Nepal : Fizakantenan’ny Fitsarana isam-paritra sy ny fanamafisana ny lalàna
Nepal 22 Janoary 2008
Indro ny fehin’izay nosoratan’i Bahas mikasika ny rafitra ara-dalàna mihatra any Nepal. “Sarotra dia sarotra ny fanamafisana ny Fitsarana sy ny lalàna fanamafisana ny demokrasia ary ny fampiasana ny rariny hahasoa ny vahoaka raha mbola eo ambany fahefana foibe (iray) hatrany ny fijoroan’izy ireny.”
Sierra Leone : Enim-bolana any an-toerana
Sierra Leone 22 Janoary 2008
Sweet Sierra Leone [Sierra Leone mamiko] mpiblaogy niverina nody hipetraka any an-tanindrazana no manoratra momba izay zavatra niainany nandritra ny enim-bolana voalohany from USA: I’ve been in Sierra Leone for 6 months now and I must say … its been hard, frustrating, humbling, and lonely. When I first got here...
Kenya : Mpanakanto mitondra fanafana hoan'ireo fery
Sociolingo no manapariaka lahatsoratra mikasika ireo mpanakanto Kenyana manampy amin'ny fitsaboana ireo ferin'ny firenena : Politicians have plunged the country into chaos but local artistes can help to heal the wounds caused by an election gone awry and the resultant lawlessness and suffering. “Natsobok'ireo mpanao politika tao anatin'ny (dobon'ny) korontana...
Repoblikan'i Afrika Afovoany 22 Janoary 2008